Taiwan oo billaabaysa barnaamij uu xukuumadda Somaliland uga caawinayo kor u qaadidda wax soosaarka beeraha deegaanada Somaliland. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Taiwan oo billaabaysa barnaamij uu xukuumadda Somaliland uga caawinayo kor u qaadidda...
Taiwan oo billaabaysa barnaamij uu xukuumadda Somaliland uga caawinayo kor u qaadidda wax soosaarka beeraha deegaanada Somaliland.
Is-maamulka Taiwan ayaa billaabaya barnaamij uu xukuumadda Somaliland uga caawinayo kor u qaadidda wax soosaarka beeraha deegaanada Somaliland.
Agaasimaha wasaaradda beeraha ee Somaliland Rooble Cabdi Muuse ayaa warbaahinta u sheegay in barnaamijkan uu kamid yahay mashruucyo dhowr ah ay Taiwan ka hirgelineyso Somaliland si loo horumariyo kobcinta iyo wax soo saarka beeraha.
“Waa mashruuc loo qaabeeyay hab iskaashi, wasaaradda ay in ku dareyso, Taiwan ay inta kale la imaaneyso, wuxuu mashruucani kaga duwan yahay mashaariicdii kale waa mashruuc loo hirgelinayo hab tijaabo ah” ayuu yiri Rooble Cabdi oo la hadlay BBC
Isagoo sii hadlayey ayaa yiri, “Taiwan waxay dalka ka sameyn doontaa beer, beertaas oo u adeegi doonto hab soo bandhigeed, markaa beertaas iyadoo adeegsaneysa habab casri ah oo dhul yar laga soo saari karo wax badan.”
Previous articleXisbiyada mucaaradka ee gobolka Tigrey oo ka digay Musiibo bina’aadanimo oo wayn” haddii aan gobolkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loo gaarsiin.
Next articleShirkii Dowlada Federaalka iyo Maamuil Goboleydyada Dhuusamareeb ka furmayoo
Abaaro xoogan oo ay ku dhinteen 15 qof oo ka jira gobolka Jubada Dhexe
Madaxweynaha Puntlaand Saciid Cabdullaahi Dani ayaa caawa si qoto dheer kaga hadlay xaaladihii ay soo wada mareen wada hadaladii dhaxmaray asaga iyo Madaxweynaha waqtiga...
Shirka Dhuusamareeb oo Saakay 10 Subaxnimo.la soo gabagabeyn doono